Nagu saabsan - Linsu Waxyaabaha Ilaalinta Deegaanka Co., Ltd.
"Giqiu" dabaqa iska leh astaanta Linyi Linsu wax ka ilaalinta deegaanka Co., Ltd. shirkaddu waxay ku takhasustay cilmi-baarista iyo horumarinta, wax soo saarka, iibinta iyo adeegga isla tayada alaabada taxanaha caagga ah ee hufan. Waxay leedahay machad cilmi baaris ah, shaybaar, warshad wax soo saar, iyo nidaam lagu ogaanayo tayada oo dhameystiran.
Iyada oo ku saleysan falsafada ganacsiga ee "tayo, summad iyo adeeg", shirkaddu waxay hoggaanka u qabataa sayniska iyo tikniyoolajiyadda waxayna sameysaa hal-abuur caqli-gal ah; waxay abuurtaa kooxda ugu sarreysa naqshadeynta iyo horumarinta, waxay si joogto ah u horumarisaa una cusbooneysiisaa qaababka ubaxyada; laba khad oo caalami ah oo hoggaaminaya wax soo saar isku midab ah oo leh awood wax soo saar maalinle ah oo dhan 240000 mitir murabac. , Kaydka taagan ee 600000 mitir murabac ah, 18 taxane wax soo saar ah iyo in ka badan 400 nooc oo midabbo ah, si loo daboolo baahiyaha kala duwan, caafimaadka, ducaynta, gaadiidka, isboortiga, hoolalka bandhigyada iwm.
Shirkaddu waxay ka gudubtay shahaadada 3C, shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001, TUV Rhine oo ku taal Jarmalka warshad qoto dheer oo kormeer ah Dhammaan alaabooyinkeennu waxay dhaafeen imtixaanka heerka caalamiga ah ee SGS, oo ay ku jiraan xirashada u adkaysiga, antiskid, olol-celinta, non-o-benzene, formaldehyde iwm alaabada shirkadda oo leh tayo aad u fiican, waxqabad aad u fiican iyo nidaamka adeegga iibka kaamil ah ayaa si ballaaran loo aqoonsaday isla markaana ay ku kalsoon yihiin macaamiisha dal iyo dibadba.
Kooxdayada injineernimada aqoonta leh ayaa sida caadiga ah isku diyaarin doonta inay kuugu adeegaan la-tashi iyo jawaab celin. Waxaan awoodnaa inaan sidoo kale kugu soo qaadno shaybaarro gebi ahaanba bilaash ah si aad u daboosho baahiyahaaga. Dadaallada ugu fiican ayaa laga yaabaa in lagu bixiyo si laguu siiyo adeegga iyo alaabada ugu habboon. Qof kasta oo xiiseynaya shirkadeena iyo walxaha, fadlan nala soo xiriir annaga oo noo soo diraya emayl ama nala soo xiriir isla markiiba. Si loo ogaado xalkayaga iyo abaabulkeena. ar dheeraad ah, waxaad u imaan kartaa warshadeenna si aad u go'aamiso. Waxaan sida caadiga ah ku soo dhaweyneynaa martida adduunka oo dhan shirkadeena.